Chii chitsva muAdobe Premiere Elements 15 ye mac | Ndinobva mac
Javier Porcar | | Zvimwe Zvirongwa zveMac
Mazuva apfuura takataura pamusoro pezvinhu zvitsva zveAdobe suite kupatsanura nekugadzirisa mapikicha paMac yedu, chishandiso icho nhasi chinopa zvakafanana masevhisi seMifananidzo yeMac, asi iine mamwe mabasa epamberi anotungamirwa kune anonyanya kudhira kana semi-nyanzvi mushandisi.
Nhasi tese taura nezve rimwe divi kana tiri kutaura nezvemufananidzo. Adobe Premiere Elements 15 Izvo zvinosvika pakuenzana neApple iMovie. Ndokunge, neichi chishandiso tinogona kuendesa vhidhiyo mune ingangoita chero chimiro, odha muraibhurari yedu kuti ugovane pasocial network kana kuita zvigadziridzo zvakapusa: vhidhiyo nguva, shanduko, mwenje uye kuzadza, pakati pevamwe.
Mune dzazvino vhezheni, mavhidhiyo ekushandisa anosanganisira otomatiki mabasa, Kusvika parizvino zvinokwanisika chete nehunyanzvi chirongwa chekugadzirisa vhidhiyo uye neruzivo rwakakodzera. Iye zvino nekungosarudza basa racho, tinogona kugadzirisa. Isu tinotsanangura pazasi ezvinyorwa zvitsva mune izvi:
Vhidhiyo collage: iyo skrini yakakamurwa kuita asymmetric zvikamu, muchikamu chega chega isu tinokwanisa kuwedzera mavhidhiyo kana mifananidzo kuti iridzwe panguva imwe chete, tichigadzira yepakutanga uye ine hunyanzvi mhedzisiro, yakakwana yekugovana pasocial network.
Auto Haze Kubvisa: Patinoita vhidhiyo kunyanya mune zvakasikwa, kamera yedu inowanzo bata mhute. Nyore nyore tinowana mufananidzo unopinza uye wakachena.
Gadzira yemaitiro echinyakare: Inhaka kubva kuiyo foto vhezheni, isu tinokwanisa kugadzirisa maparamende ane chekuita nechiedza uye ruvara rwe akati wandei mavhidhiyo panguva imwe chete. Iyi ficha inochengetedza yakawanda nguva nevazhinji vhidhiyo clip.
Isa mimhanzi kureba kwevhidhiyo: patinogadzirisa vhidhiyo nemumhanzi. Ini ndinodzora vhidhiyo kureba kwemimhanzi here? Iri basa nyowani rinoita zvinopesana, rinogadziridza mimhanzi kuti ikwane kureba kwevhidhiyo.
Kurumidza kwemafirimu montages: Iyo tekinoroji inoshandiswa mune ino basa inokutendera iwe kuti ugadzire zvisingaite mafirimu mumaminetsi mashoma. Tora mukana wekuona kumeso kuita kuti zviso zviuye pamberi. Inoshanda nekumhanyisa otomatiki, nguva dzekurangarira, kupenesa uye kusimudza.
Adobe Premiere Elements 15 Inotengeswa pamwechete neAdobe Photoshop Elements 15 pamutengo we € 151,25 uye € 110,11 yevadzidzi kana vadzidzisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Zvimwe Zvirongwa zveMac » Chii chitsva muAdobe Premiere Elements 15 ye mac